‘आविष्कार केन्द्र बन्छ, म त झन् हौसिएको छु’
हामी किन पछि पर्यौं ? विकास किन भएन ? धेरैले राजनीतिलाई मात्र दोष थुपार्छन् ‍। भूपरिवेष्टित देश भयो, बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध सहज भएन, अझ भनौँ भारतले विकासमा छेको हाल्यो, यस्तैले
सिसीटिभी जोड्दा कारबाहीमा परिएला !
काठमाडौं । घर, पसल वा कार्यालयमा सुरक्षाका लागि क्लोज सर्किट (सिसी) टीभी क्यामेरा जडान गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति बिना यसो गर्नु भयो भने कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ ।
हाई-टेक बन्न थाले नेपाली ज्योतिष, सफ्टवेयरले बनायो सजिलो
काठमाडौं । पहिले पहिले नेपाली कागजमा घण्टौं कोरेर ज्योतिषहरूले जन्मकुण्डली तयार गर्थे । कुन्डलीकै आधारमा गणितीय माध्यमबाट घण्टौ विश्लेषण गरेर व्यक्तिको भविष्यफल बताइदिने प्रचलन थियो । गाउँघर तिर अझै पनि
सिंहदरबारका सिसी क्यामेरा: दिनभर सक्रिय रातभर निष्क्रिय
देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सबै प्रवेशद्धार लगायत परिसर भित्रका विजुलीका खम्बाहरुमा आाखा लगाउनु भयो भने ‘तपाईर्ंलाई सीसी क्यामेराले हेरिरहेको छ ।’ भन्ने सुचना टाँस गरेको पाउनु हुन्छ । हुन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको एक महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना करिब असफल साबित भएको छ । नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी टेलिकमले ७ महिना अगाडि सामाजिक सञ्जाल ‘मीट’ सुरू गरेको थियो । ७
सहरी फोहोरको गन्धको व्यथा भनिनसक्नु छ । घरआँगनको फोहोर उठाउने कार्य त समय–समयमा अवरोध हुने अवस्थामा सरकारले विद्युतीय फोहोर (ई वेस्टेज) बाट निस्कने गन्धजस्तो गहन विषयमा ध्यान देला भनी आशा
के हो स्मार्ट सिटी ? नेपालको तयारी के छ?
सामान्यतया ‘स्मार्ट सिटी’ भनेको त्यस्तो सहर हो, जहाँको भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुन्छ । यसलाई पूर्ण व्यवस्थित शहरको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । आधुनिक शहरमा आवश्यक पर्ने
क्यानेडियन कमेडी मास्टर रसल पिटरको कमेडी शो होस वा टेलर स्विफ्टको नयाँ म्युजिक भिडियो मन परेको दोहोरी वा त फिल्मको ट्रेलर नै, अहिले यूट्यूबमा नभेटिने भिडियो सायदै छैन होला |
चीनले प्रक्षेपण गर्‍यो विश्वकै पहिलो ह्याक-प्रुफ स्याटेलाइट
चीनले विश्वकै पहिलो ह्याक–प्रुफ क्वान्टम स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको छ । चीनले विश्वका सबै शक्ति राष्ट्रहरुलाई पछि पार्दै कसैले पनि ह्याक गर्न नसक्ने सञ्चारको स्थापनाका लागि यस्तो स्याटेलाइटको प्रक्षेपण गरेको हो
एनटिसीका ग्राहक पुगे १ करोड ४४ लाख, एनसेललाई बढ्यो चुनौती
काठमाडौं । सबैभन्दा बढि टेलिफोन ग्राहक हुने टेलिकम कम्पनीमध्ये फेरी नेपाल टेलिकम अगाडि आएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पछि पार्दै नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको संख्या १ करोड ४४ लाख पुर्‍याएको